I-PIM, ekwabizwa ngokuba yiPassive Intermodulation, luhlobo lokuphazamiseka komqondiso. Kuba uthungelwano lwe-LTE lunovakalelo olugqithisileyo kwi-PIM, indlela yokufumanisa nokunciphisa i-PIM ifumene ingqalelo engakumbi nangakumbi.
I-PIM yenziwe ngokuxutywa okungafaniyo phakathi kwee-frequencies ezimbini okanye ngaphezulu kwe-carrier carrier, kwaye isibonakaliso esiphumelayo siqulethe i-frequencies eyongezelelweyo engafunekiyo okanye iimveliso ze-intermodulation. Njengoko igama elithi "passive" kwigama elithi "passive intermodulation" lithetha okufanayo, ukuxuba okukhankanywe ngasentla okungaqhelekanga okubangela ukuba i-PIM ingabandakanyi izixhobo ezisebenzayo, kodwa ngokuqhelekileyo zenziwe ngezinto zetsimbi kunye nezixhobo ezidibeneyo. Inkqubo, okanye amanye amalungu okwenziwa kwisixokelelwano. Izizathu zokuxuba okungaqhelekanga kunokubandakanya oku kulandelayo:
• Iziphene kuqhagamshelo lombane: Kuba kungekho ndawo igudileyo engenasiphako emhlabeni, kusenokubakho iindawo ezinoxinano oluphezulu lwangoku kwiindawo zoqhagamshelwano phakathi kwemiphezulu eyahlukeneyo. Ezi nxalenye zivelisa ubushushu ngenxa yendlela elinganiselweyo yokuqhuba, okukhokelela ekutshintsheni ukuchasana. Ngenxa yesi sizathu, ikhonkco kufuneka ihlale igxininiswe ngokuchanekileyo kwi-torque ekujoliswe kuyo.
• Ubuncinci umaleko omnye obhityileyo okhoyo kwimiphezulu yesinyithi, enokubangela iziphumo zetonela okanye, ngamafutshane, ikhokelele ekucuthekeni kwendawo yokuqhuba. Abanye abantu bacinga ukuba le nto inokuvelisa umphumo we-Schottky. Kungenxa yoko le nto iibholiti ezigrunjiweyo okanye uphahla lwentsimbi egrunjiweyo kufutshane nenqaba yeselula zinokubangela imiqondiso eyomeleleyo ye-PIM egqwethekileyo.
• Imathiriyeli ye-Ferromagnetic: Izinto ezifana nentsimbi zinokuvelisa ukuphazamiseka okukhulu kwePIM, ngoko ke izinto ezinjalo akufanele zisetyenziswe kwiinkqubo zeselula.
Uthungelwano olungenazingcingo luye lwaba nzima ngakumbi njengoko iinkqubo ezininzi kunye nezizukulwana ezahlukeneyo zeenkqubo ziqalise ukusetyenziswa ngaphakathi kwendawo enye. Xa iimpawu ezahlukeneyo zidityanisiwe, i-PIM, ebangela ukuphazamiseka kwisignali ye-LTE, yenziwa. Ii-eriyali, ii-duplexer, iintambo, iintambo ezimdaka okanye ezikhululekileyo, kunye nezixhobo ezonakalisiweyo zeRF nezinto zentsimbi ezibekwe kufutshane okanye ngaphakathi kwesikhululo seselula zinokuba ngumthombo wePIM.
Ekubeni ukuphazamiseka kwe-PIM kunokuba nefuthe elibalulekileyo ekusebenzeni kwenethiwekhi ye-LTE, abaqhubi abangenazintambo kunye neekontraka bafakela ukubaluleka okukhulu kumlinganiselo we-PIM, indawo yomthombo kunye noxinzelelo. Amanqanaba e-PIM awamkelekileyo ayahluka ukusuka kwisistim ukuya kwisistim. Ngokomzekelo, iziphumo zovavanyo lwe-Anritsu zibonisa ukuba xa inqanaba le-PIM linyuka ukusuka kwi--125dBm ukuya kwi--105dBm, isantya sokukhuphela sihla nge-18%, ngelixa i-yangaphambili kunye neyokugqibela Amaxabiso omabini athathwa njengamanqanaba e-PIM amkelekileyo.
Ngawaphi amalungu afuna ukuvavanyelwa iPIM?
Ngokubanzi, icandelo ngalinye lifumana uvavanyo lwe-PIM ngexesha loyilo kunye nemveliso ukuqinisekisa ukuba ayibi ngumthombo obalulekileyo we-PIM emva kokufakwa. Ukongezelela, ekubeni ukuchaneka koqhagamshelwano kubalulekile kulawulo lwe-PIM, inkqubo yokufakela nayo iyinxalenye ebalulekileyo yolawulo lwe-PIM. Kwinkqubo ye-antenna esasazwayo, ngamanye amaxesha kuyimfuneko ukwenza uvavanyo lwe-PIM kuyo yonke inkqubo kunye novavanyo lwe-PIM kwicandelo ngalinye. Namhlanje, abantu baya besamkela izixhobo eziqinisekisiweyo ze-PIM. Umzekelo, ii-eriyali ezingaphantsi kwe-150dBc zinokuthathwa njengokuthotyelwa kwe-PIM, kwaye iinkcukacha ezinjalo ziya zisiba nzima.
Ukongeza koku, inkqubo yokukhetha indawo yesiza seselula, ngakumbi ngaphambi kokuba indawo yeselula kunye ne-antenna imiselwe, kunye nesigaba sofakelo esilandelayo, sikwabandakanya uvavanyo lwe-PIM.
I-Kingtone inikezela ngeendibano zentambo ze-PIM eziphantsi, izixhumi, i-adapters, i-multi-frequency combiners, i-co-frequency combiners, i-duplexers, i-splitters, i-couplers kunye ne-antenna ukuhlangabezana neentlobo zeemfuno ezinxulumene ne-PIM.